သင့်ကိုယ်ပိုင်သည့်အရာတစ်ခုကို Canon ဖြည့်ဖို့ဘယ်လို | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သင့်ကိုယ်ပိုင်သည့်အရာတစ်ခုကို Canon ဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Струйные принтеры являются наиболее доступными по стоимости решениями для вывода цифровой информации на бумажный носитель. Есть всего несколько фирм, занимающихся массовым выпуском подобных принтеров. Это Epson, Canon и HP. Другие производители (например, "Самсунг") более известны подобными устройствами иного типа. Как известно, стоимость одного отпечатка складывается из цены израсходованных чернил, бумаги и сопутствующих расходов – электроэнергии, износа принтера.
ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အစားစက်ရုံဝယ်ယူများ၏မှုတ်မှင်သည့်အရာတစ်ခုဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူစေလျှင်, အရာများ၏စျေးနှုန်းကိုမကြာခဏပရင်တာ၏ဝယ်ယူသုံးစွဲထက်ဝက်ကျော်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကိရိယာနှင့်အတူသိသိသာသာစျေးနှုန်းချိုသာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျည်တောင့်ကို Canon refill ဖို့ဘယ်လိုများ၏ပြဿနာ, နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဖြေရှင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့အယူခံဝင်။ ဒါဟာဒုတိယအများကြီးစျေးသက်သာကြောင်းသိသာသည်။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သည့်အရာတစ်ခုကို Canon Pixma ဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအခြေခံမူရှိသမျှသည်အခြားသော inkjet devices များသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒီ model နေဆဲရေပန်းစားသည်ကတည်းက Next ကိုကျနော်တို့က, သည့်အရာတစ်ခုကို Canon-510 ဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ...
ကျည်တောင့်ကို Canon မျှကြီးမားသောသဘောတူညီချက် refill ဖို့ဘယ်လိုသော်လည်း, လုပ်ရပ်တွေကို၏နံပါတ်အမှန်တကယ်စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီဖျော်ဖြေရပါမည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ကပါးလွှာသောတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့မှင်လိုချင်သောအရောင် (အရေအတွက်ကိုပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်), တစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်လက်အိတ်, ပါးလွှာလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်2မီလီမီတာအချင်းခြောက်သွေ့ဂွမ်း, စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါများနှင့်အချို့သောဟောင်းသတင်းစာများအကြောင်းကိုတူးနှင့်အတူဆေးထိုးပိုက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သောကြိုတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပိုက်ဝယ်ယူ, သူတို့ကအသုံးပြုကြသည်ဟူသောအချက်ကို၏အမြင်အသီးအသီးအရောင်အဘို့တယောက်လိုအပ် (မကျည်တောင့်!) ။
ကျည်တောင့် refill လုပ်နည်း ကို Canon
Участок стола, на котором будет выполняться доливка чернил в емкости, нужно тщательно укрыть несколькими слоями газет. В противном случае протекшую краску придется смывать с поверхности. А это, поверьте, без жидкости для промывки довольно сложно. Из принтера извлекается первый картридж и боком кладется на стол. Если печатающая головка объединена с емкостью, то нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить сопло. Наклейку с верхней части картриджа следует снять, но не выбрасывать – она еще пригодится. Под ней находится структура каналов, сходящаяся к пластиковому кругу (один в черном и несколько в цветном картридже). В этом месте сверлом нужно аккуратно проделать отверстие. Переживать о стружке, попадающей внутрь, не стоит – там пористый материал. Требуется, чтобы диаметр иглы был меньше, чем у получившегося отверстия. Это важный момент, о котором люди иногда "забывают", рассказывая, как заправлять картридж Canon. Теперь можно надевать перчатки и приступать к работе с краской.
အနက်ရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: တစ်ပြွတ် 2-4 ml ကိုသုတ်ဆေးအတွက်ခုခံခြင်း (စုပ်ပစ္စည်းအထက်ပိုင်း) ခံစားခဲ့ရသည်တိုင်အောင်အထိကွန်တိန်နာထဲသို့ဆေးထိုးအပ်မိတ်ဆက်။ အများအားဖြင့်က 0,5-1 စင်တီမီတာ။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းသည့်အရာတစ်ခုအတွက်မှင်ဖျစ်ညှစ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှ4အလုံအလောက် ml - ငါသွန်းလောင်းရန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Nedolya ဖြည့်အခါ။ ထိုအခါအရပ်ဌာန၌အဖုံးပေါ်တွင်စတစ်ကာပြန်လာ (ဒီခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ရေငွေ့ပျံလျှော့ချမည်ဟု) နှင့်ကျည်တောင့်ထား၏။ ဒါပေမယ့်အရောင်အကြံပေးအဖွဲ့များအတွက်နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေး: အဖုံးကိုသုံးတွင်းစေနှင့်အရောင်တူညီသည့်ဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် (တစ်ခါတစ်ရံအမိန့်အနှောငျ့အယှ) ။ ကျည်တောင့်နှင့်အနာမတျော၏အမျိုးအစားအားဖြင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုအရောင်နဲ့ကိုက်ညီသည့်အပေါက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မူအရ, သငျသညျရိုးရိုးစစ်ဆေးခြင်းမှအဖုံးကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ပြွတ်ဆေးထိုးခြင်းအဘို့အ။ အရောင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်2ml ကိုအကြံပြုသည်မဟုတ်။ အထက်ပါမှတူညီအားသွင်းဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ သင်သည့်အရာတစ်ခုသုတ်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါဂွမ်းနှင့်တစ်ရှူးကိစ္စတွင် perezalivke အတွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,238 စက္ကန့်ကျော် Generate ။